Resin Ion Exchange, resin mgbanwe Cation, resin Exchange Anion - Dongli
Kedu ihe anyị na -eme?
Bengbu Dongli Chemical Co., Ltd. bụ onye nrụpụta kachasị nke resin mgbanwe ion dị elu dị iche iche na China. Ahịrị ngwaahịa ụlọ ọrụ Dongli na -ekpuchi SAC, WAC, SBA, WBA, MADEBED na resin pụrụ iche na -emepụta kwa afọ nke 20000MT (25000 M3) nke ọkwa ọkwa ụlọ ọrụ…
SBA (CL, OH, ntọala efu, jel, nnukwu ihe)
WBA (CL, OH, ntọala efu, jel, nnukwu igwe)
Ọ BỤLA ngwaahịa na -amasị gị?
Nkọwapụta ngwaahịa ahaziri, ika, akara, maka mkpa gị pụrụ iche.
Ike mmepụta zuru ezu bụ 30000 M3, gụnyere osisi resin Cation, osisi anion resin, osisi resin macroporous.
Ka ọ na -erule njedebe nke 2020, ngụkọta mmepụta ya ruru 27000 M3, anapụtara ya na arịa 1000+.
Ahịa mba ofesi:> 80%
Ahịa ụlọ: <20%
Ego mbata ahịa ruru $ 7.5 nde site na 2020
A na-eji resin mgbanwe cation na-agwọ hyperkalemia site n'ịgbalite mfu nke potassium site na eriri afọ, ọkachasị n'ihe gbasara ...
Ihe ọmụma resin mgbanwe cation
A na-eji resins mgbanwe mgbanwe iji gwọọ hyperkalemia site n'ịgbalite mfu nke potassium site na eriri afọ, ọkachasị n'ihe gbasara mmamịrị na-adịghị mma ma ọ bụ tupu ịrịa ọrịa (ụzọ kachasị dị irè isi gwọọ hyperkalemia). Ihe resin c ...
Kedu ihe bụ nrụpụta resin IX?
Kedu ihe bụ nrụpụta resin IX? N'ime otu okirikiri ọrụ ma ọ bụ karịa, resin IX ga -agwụ, nke pụtara na ọ nweghị ike ịkwalite mmeghachi omume mgbanwe ion. Nke a na -eme mgbe ion na -efe efe agbagoro n'ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ saịtị niile na -arụ ọrụ na res ...
Resin mgbanwe cation: mgbanwe resin ihe ọmụma
Nhọrọ a nke resin mgbanwe ion nwere njikọ na ihe ndị a: 1. Ka ọ na -akwụkwu ụgwọ otu ion, ọ ga -adịrịrị mfe site na resin mgbanwe anion. Dịka ọmụmaatụ, a na -ekesa ion divalent karịa ion monovalent. 2. Maka ion ndị nwere otu ụgwọ, i ...